Laser Teeth Whitening | Way Best inay Guide Ilkaha caddeeya aanu u caddayn
Sida loo caddeeya aanu u caddayn ilkaha DEGDEG iyo SHAQADA!
Waxaa jira siyaabo badan oo qofka dooran kartaa, ku saabsan sida loo sida loo caddeeya aanu u caddayn ilkaha. Lahaanshaha nadiif ah, ilkaha cad waa heshiis weyn. Marka ilkaha raadinayso ugu fiican, aad dareento in aad fiican naftaada iyo kalsooni badan oo ku saabsan, diyaar u ah inay qaataan on dunida. Dhinaca kale, ilko huruud guriga marsan, waxaad bilaabeysaa inaad dareento ammaan ahayn iyo xitaa waxaa laga yaabaa in aysan rabin in ilka. Muddo, ilkaha waxa kaliya ee u socday si aad u hesho ka xun haddii aadan qaadan tallaabooyin ku habboon xagga caddeeyo oo iyaga kordha.
Si aad u hesho ilkaha cad, tallaabada ugu horraysa waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad isku dayi sida loo caddeeya aanu u caddayn ilkaha waxaa ay kor u bedesheen cadayga ee caadiga ah si aad u hesho version a caddeeyo. cadayga waxa ku jira maaddooyinka ku daray, waxyaabaha la caddeeyo in shaqeeyaan si loo soo saaro Wasaqda off ilkaha, iyaga oo raadinaya dhalaal iyo caddaan hor. cadeyga Kuwani caadi ahaan waa kuu qiimihii la mid ah sida cadayga caadiga ah, laakiin ku siin karaan natiijooyin lama filaan ah dib u yaraydeen isticmaalka.
The alaabta strips cad mar walba waa mid aad loo jecel yahay. Haddii aad rabto in aad si aad u barato sida loo caddeeya aanu u caddayn ilkaha, isku day inaad ka strips cad baxay naftaada oo bal arag waxa a kala duwan yihiin, waxay ka dhigi kartaa. Inta badan waxyaabaha strips cad ka kooban toban ilaa labaatan strips, iyo waxa ay sida caadiga ah waxaa loo soo jeediyey in aad isticmaasho hal maalin ilaa aad isticmaashay oo dhan strips ah. By dhamaadka wakhtigaas, waa inaad awoodaa inaad aragto horumar weyn oo xaalad iyo midabka ilkaha.
Waxaa sidoo kale jira hab kale oo ku saabsan sida loo caddeeya aanu u caddayn ilkaha taas oo ilkaha laser ku caddeeyo nidaamka, hab la isku qurxiyo sameeyaa xafiiska dhakhtarka ilkaha ama in a ilkaha laser caddeeyo xarunta. Habkani waxaa siinayaa natiijada ugu weyn ee ilkaha oo dhan caddeeyo hababka, ku dhawaad ​​isla caddeeyo ilkaha laba midabo ama ka badan. Sidoo kale loo yaqaan bleaching ilkaha, habka tani waa arrin caan ah oo adduunka oo dhan, sida mid ka mid ah ilkaha ugu waxtarka badan la caddeeyo hababka. Inta lagu guda jiro nidaamka this, gel gaarka ah waxaa laga codsadaa in ka badan ilkahaaga, ka dib markii taas oo iftiin laser ah waxaa loo isticmaalaa in ka badan gel ah, waxay kaakicin iyo caddeeyo ilkaha iyadoo ay sabab u.
Waxbarashada sida loo caddeeya aanu u caddayn ilkaha Khasab ma aha in uu noqon caqabad weyn. Iyadoo hababka badan oo wax ku ool ah la caddeeyo ilkaha, waxaad ka heli kartaa hab ka shaqaysa si aad u dhalaalaya ku siin ah, dhoola cad aad mar walba ku riyoon jiray. Waxa aanu u leeyihiin in ay aad lacag maal ah si meesha looga saaro Wasaqda adag ka ilkaha oo si weyn loo hagaajiyo dhoolla. The ilkaha dhalaal, ayaa in ka badan aad rabtid in aad iftiimisid, iyo marka aad dareento in aad fiican aad eegto fiican.
internet waa isha ugu wanaagsan ee aad isticmaasho marka raadinaya siyaabo sida loo caddeeya aanu u caddayn ilkaha. gabi ahaanba Waxaad soo ururin doonaa badan oo tafaasiil wanaagsan oo ku saabsan siyaabaha sida loo caddeeya aanu u caddayn ilkaha iyo in dhab ahaan dareen ka dhigi doonaa og in mar si ilkaha dhalaal iyo caddaan waa faa'ido in qof walba, sidaas arko in aad leedahay dhoola ugu fiican ee aad ku yeelan kartaa.
Posted by Guide Ilkaha caddeeya aanu u caddayn - June 5, 2016 at 12:04 AM
Categories: Home ku saleysan in Ilkaha caddeeya aanu u caddayn Tags: sida loo caddeeya aanu u caddayn ilkaha, ilkaha laser caddeeyo, ilkaha caddeeyo, ilkaha caddeeya, ilkaha caddeeya guriga